प्रचण्डले एमालेलाई भित्तामा पुर्‍याए, अब केपीले तु राजिनामा दिनुपर्छ – सुवास नेम्वाङ – Annapurna Post News
May 22, 2022 sujaLeaveaComment on प्रचण्डले एमालेलाई भित्तामा पुर्‍याए, अब केपीले तु राजिनामा दिनुपर्छ – सुवास नेम्वाङ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले सबै दलहरू मिलेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्लाउने कुरा संसारमा कतै नभई नेपालमा मात्रै भएको दावी गरेका छन्।
मंगलबार मदन-आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले यस्ताे दावी गरेका हुन्।
उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनको बारेमा म प्रष्ट छु। नेकपा एमाले जो प्रमुख प्रतिपक्ष हो, राज्यको अभिन्न अंग हो। संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। तर आश्चर्यको कुरा सत्तामा रहेका साथीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्ल्याउने ढंगले जुन काम कारबाही गर्नुभयो, त्यो आश्चर्यको कुरा हो। त्यो कतै भएको छैन, यहीँ नेपालमा मात्र भएको छ।’
उनले सबै मिलेर एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्दासमेत आइरहेकाे मत परिणामले आफू उत्साहित भएकाे पनि बताए।
उपाध्यक्ष नेम्बाङले भने, ‘अहिले हामीले गरेको कामबाट आएको परिणामबाट हामी उत्साहित छौँ। सबै मिलेर एक्ल्याउने प्रयास भए पनि हामीले दृढतापूर्वक सामना गरेर आएको परिणामबाट म उत्साहित छु। जे भएको छ त्यो गलत भएको छ। गठबन्धन हुन्छ तर त्यो गठबन्धन संसदीय मूल्य र मान्यताको हुनुपर्छ। मूल्य, मान्यता विपरीत भएका गठबन्धनहरू देश र जनताको हितमा हुँदैनन्। त्यही सम्बन्धित पार्टीकै हितमा पनि हुँदैन। यसै पटक पनि जनताले गरेको निर्णयमा कता कता त्यसको झलक देखिन्छ।’
त्यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिले पनि जनतमको हिसाबले नेकपा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको दाबी गरेका छन्।त्यस्तै, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय निर्वाचन बिथोल्न सरकार नै गुण्डागर्दी गरेर लागि परेको आरोप लगाए।पहिलो पार्टी तेश्रो भएपछी पार्टी भित्रै बाट एमाले अध्यक्ष ओलीको राजिनामा दिनुपर्ने तर्कहरु आइरहेका छन । नेकपा बिभाजन र एमाले बिभाजन हुनुको प्रमुख कारण ओली भएको धेरैको बुझाई छ ।
भरतपुरमा रेनुलाई कांग्रेसको घात, एमालेको साथ !स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ । अहिलेसम्मको मतको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा मेयरमा रेनु दाहालले बाजी मार्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
यहाँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेनु, नेकपा (एमाले)–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बीचको गठबन्धनका तर्फबाट विजय सुवेदी र नेपाली कांग्रेसका ‘बागी’ जगन्नाथ पौडेल मेयर पदका उमेदवार छन् ।
कांग्रेसबाट बागी उमेदवार भएकाले सजिलै भरतपुरको चुनाव जित्ने एमाले अनुमान थियो । तर, एमालेको अनुमान तब फेल खायो, जब एमालेकै गढ भनिएका वडाहरूमा रेनुले विजयभन्दा बढी मत ल्याइन् ।
भरतपुर महानगरका १४ वटा वडासम्मको मतगणना गर्दा रेनु २७ हजार ४१२ मतसहित अग्रस्थानमा छिन् । सुवेदीले २२ हजार २७९ मत प्राप्त गरेका छन् । स्वतन्त्र उमेदवार पौडेलले नौ हजार ५५२ मत ल्याएका छन् ।
गणना सकिएका वडामा कांग्रेसले १, २, ४, ५, ६, ८, १० र १४, एमालेले वडा–३, ११ र १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ७ र ९ तथा माओवादी केन्द्रले वडा नम्बर–१३ मा विजय हासिल गरेको छ ।हाल भरतपुर–१५ र १६ को मतगणना जारी छ । गणना जारी वडामा कांग्रेसका उमेदवारले अग्रता लिएका छन् । भरतपुरमा एक लाख २७ हजार ८३९ मत खसेको थियो । हालसम्म ७० हजार बढी मतगणना भइसकेको छ ।
मतगणना जारी रहँदा माओवादी वृत्तमा उत्साह बढ्दै गएको छ । एमाले वृत्तमा निराशा छाउन थालेको छ । सुरुका पाँच वडा गन्दा रेनु र विजयको अन्तर धेरै थिएन । तर, वडा नम्बर–९ को गणनासँगै रेनुको अग्रता बढ्दै गयो । अहिले रेनु पाँच हजार बढी मतान्तरले अगाडि छिन् ।
तीन वडामा निराश बन्यो एमाले-भरतपुर–९ को गणना हुँदै गर्दा रेनु विजयभन्दा तीन हजार बढी मतान्तरले अगाडि थिइन । तर, १०, ११ र १२ वडाको गणना सुरु हुँदा त्यो मतान्तर घट्ने एमालेको विश्वास थियो । तर, उल्टो भयो । ती वडामा पनि रेनुले विजयलाई पछि पारिन् । एमालेका वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत नै विजयले प्राप्त गरेनन् ।
वडा नम्बर–१० एमालेका संघीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको घर भएको क्षेत्र हो । वडा–११ एमालेको सबैभन्दा बलियो क्षेत्र मानिएको थियो । जहाँ वडाध्यक्ष एमालेले नै जित्यो । उक्त वडामा सबैभन्दा धेरै साढे नौ हजारभन्दा बढी मत खसेको थियो ।वडा–१२ एमाले मेयर उमेदवार विजय सुवेदीको गृहवडा हो । त्यहाँ पनि एमाले निराश भयो ।
वडा–१३ माओवादीको प्रभाव क्षेत्र हो । त्यहाँबाट रेनुको अग्रता झनै फराकिलो बन्दै गएको छ । कुनै चमत्कार नभए अब विजयको मेयर बन्ने सपना कमजोर बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।वडा–१० र ११ मा एमाले वडाध्यक्ष उमेदवारलाई भन्दा मेयर उमेदवार सुवेदीलाई कम भोट प्राप्त भयो । अरू वडाहरूमा पनि मेयरमा रेनुलाई मत दिनेहरूले अन्य सबैजसो पदमा एमालेको सूर्य चिह्नमा मतदान गरेको देखिन्छ । यसले एमालेभित्रै अन्तर्घात भएको चर्चा छ ।
अब एमालेको आस पश्चिम चितवन भरतपुर महानगरमा अब एमालेको नजर पश्चिम चितवनका वडाहरूमा छ । मतगणना जारी छ । १४ नम्बर वडासम्मको परिणाम आइसकेको छ । रेनुको अग्रता बढ्दै गएको छ ।
वडा–१३ माओवादीको सबैभन्दा धेरै प्रभाव भएको वडा हो । १४ नम्बर वडा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृहवडा हो । यी वडाबाट रेनुले राम्रो मत पाएकी छन् ।
यसबाहेक वडा नम्बर–१५, १६, १७, १९, २० नेपाली कांग्रेस बलियो भएको क्षेत्र हुन् । यहाँबाट एमालेले कम मत पाउने अनुमान छ । यी वडामा स्वतन्त्र उमेदवारले बढी मत आफूतिर ताने पनि रेनुलाई त्यसले खासै असर नगर्ने नेताहरू बताउँछन् ।विजयसँग रेनुको मतान्तर पाँच हजारभन्दा बढी भएकाले त्यसको फाइदा माओवादीलाई नै हुने बताइएको छ । स्वतन्त्र उमेदवार पौडेललाई कांग्रेसको मत जाने सम्भावना रहे पनि विजयको भन्दा रेनुकै मत बढी नेताहरूको भनाइ छ ।
वडा नम्बर–१६ मा १८, १९ बाट विजय सुवेदीले मत पाउने अपेक्षा छ । अनपेक्षित परिणाम नआएको अवस्थामा विजयको विजययात्रा कठिन बन्दै गएको छ ।
यसबाहेक वडा नम्बर–२२, २३, २४, २५ लगायत केही वडामा राप्रप्राको प्रभाव रहेकाले त्यहाँको मतको अपेक्षा सुवेदीले गरेका छन् । तर, यसअघि अपेक्षा गरिएकै वडाबाट मत नपाएकाले ढुक्क हुने अवस्था भने देखिँदैन ।
भरतपुरमा रेनुलाई कांग्रेसको घात, एमालेको साथ-भरतपुरमा एमालेको मत नै रनुको अग्रता बनाउने आधार देखिएको छ । एमालेका वडाध्यक्षले पाएको मत मेयरमा विजय सुवेदीले पाएका छैनन् । यसले एमाले कमजोर बन्दै गएको हो ।
मतगणनामा संलग्नहरूका अनुसार धेरैजसो मतपत्रमा मेयरमा रेनुलाई मत दिएर अरू सबै छाप सूर्यमा लगाइएको छ । यसले रेनुलाई ठूलो राहत मिलेको छ । नत्र ‘बागी’ उमेदवार पौडेल रेनुका लागि खतरा हुनसक्थे ।
एमालेकै नेताहरूले मेयरमा रेनुलाई भोट जाने तर अरू सबै भोट सूर्यमा आउनुलाई आश्चर्यका रूपमा लिइरहेका छन् ।त्यसो त ०७४ सालमा एमालेका मेयर उमेदवार देवी ज्ञवालीले राम्रो मत ल्याएका वडामा पनि यसपालि विजयले राम्रो मत पाएका छैनन् ।
निर्वाचनमा मेयरको टिकट वितरणको बेला एमालेभित्र केही असन्तृष्टि रहेको बताइन्छ । एमाले वडाध्यक्षले पाएको मत विजयले पाएको भए रेनु पछाडि पर्ने एमाले नेताहरूको दाबी छ ।
अर्कोतर्फ, माओवादी र कांग्रेसले बागी उमेदवार पौडेलले ६ हजारको हाराहारीमा मत ल्याउने अनुमान गरेका थिए । तर, पौडेलले अनुमानविपरीत १० हजारको हाराहारीमा मत ल्याइसकेका छन् । अहिलेकै अवस्थाको विश्लेषण गर्दा उनले १५ हजारको आसपासमा मत ल्याउने देखिन्छ ।
बलात्कारसम्बन्धी कानून संशोधन, विद्यार्थीहरुले बुझाए मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
खसी का टे जस्तो मान्छेलाई का टेर मासु थुपारेपछी गाउँलेहरु आफू पनि मारिने डरले थर्कमान छन् ?
बालेन शाहको अर्को निर्णयले भाडामा बस्नेहरुलाई समेत राहत !
केजरीवालको झल्को दिनेगरी बालेनको अर्को बोल्ड निर्णय आयो कार्यान्वयनमा, काठमाडौंका घरभेटीमात्र होइन घरभाडामा बस्नेहरु समेत खुसीले गदगद !